Muran dhul oo u dhaxeeya qabiilka Maasai iyo dawladda Tanzania - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka JASON PATINKIN
Image caption Sawir Hore : Qaar ka mid ah Maasai da degta Tanzania
Muran dhuleed oo u dhaxeeya dowladda Tanzania iyo qabiilka Maasai ee dalkaasi degta ayaa gaaray heerkii ugu xumaa kadib markii ay dowladda si xoog ah dhulkoodii oga rartay dadkan.
Maasai da ayaa waxa ay ku hanjabeen in ay dhulkooda ku dhiman doonaan, islamarkaasina aanan marnaba laga rari doonin.
Ciidamadda illaalada duurjoogta Tanzania ayaa todobaadkii hore burburiyey guryo badan oo ay lahaayeen dadka Maasai da ah, waxayna dowladda doonaysaa in ay ka guuraan meelaha u dhow kaynta Serengeti oo xayawaan badan oo loo dalxiis tago ay ku noolyihiin.
Mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha qabiilkan ayaa sheegay in la gubay illaa 400 oo ah carshaanta ay ku hoydaan, waxaana barokacay illaa 200 qof.
Waxa uu intaasi ku daray in hanti gaaraysa kumanaan doolar oo ah xoolo kala duwan sida lo' iyo ari ay maqanyihiin.
Murankan waa mid soo jiitamayay muddo 20 sano ah, waxana uu ku salaysanyahay dhul baaxadiisu dhanyahay 1500 kiilo mitir oo kaynta Sarengeti ah, halkaasi oo dowladda doonayso in si gaar ah u xifdiso maadaamaa ay tahay goob dalxiis.
Dorina Makaya waa agaasimaha warbaahinta wasaaradda khayraadka dabiiciga ah, iyada oo ka hadlaysa arrintan ayay tiri "Ma ahan in dowladda ay iska maagayso Maasai da, ee meesha ay degenyihiin waa halka ay kasoo qulqulaan illaha biyaha ay ka helaan xayawaanka ku nool kaynta Serengeti, tan kale halka laga rarayo dadka waa halkii ay lo' gisida kusoo marto hayaanka dheer sanadkiiba marka ay u kala talaabayaan labada dhinac ee Kenya iyo Tanzania ee kaynta, marka haddii meeshaasi dadka loo ogolaado wax kasta halis ayay galayaan".
Balse Maasai da ayaa waxa ay sheegayaan in dhulkani uu yahay dhulkii awoowayaashooda, islamarkaasina ay illaashan doonaan waligoodba.
"Goaankeena waa in aan ku dhimanaa, sababtoo ah ma haysano meel kale oo aan aadno, halkeen aadaynaa?, halkan waa dalkeena halkeen oga cararnaa ?, awoowayaasheena halkan ayay ka yimaadeen, anagana halkan ayaan ku dhalanay" ayuu yiri Efren Kaura oo ah oday 73 jir ah oo 40 sanno ku noolaa dhulkan.
Dadkan ayaa waxa ay qabaan in dowladda ay danahooda ka hormarineyso dadka ajaaniibta ah ee maalgashaday dhulka.
Guddi uu sanadkan horaantiisii saaray Ra'isulwasaare Khaasim Majiliwa ayaa loogu talogalay in uu baaro muranka dhulkan, balse wali wax warbixin ah lagama soo saarin waxyaabihii lagu ogaaday baaritaanka.
Maasai-da ayaa ah dad xoolo dhalato ah oo noloshooda inta badan ku qaata duurka, waxayna ku noolyihiin Tanzania iyo Kenya.
Ninka ugu dheer Tanzania oo dhirirkiisa owgiis qalliin loogu diiday
Tanzania oo loogu baaqay inay joojiso caburinta ururada bulshada rayidka ah
Tanzania oo eriday 10kun oo lagu shaqaaleeyay shahaadooyin been abuur ah